Debunking "သင်ကညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစိတ်ပူသင့်သလား" (The Daily Dot's Claire Downs မှထုတ်ဝေသည်။ ) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်порно
Debunking“ သင်ကညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစိတ်ပူသင့်သလား။ ” (The Daily Dot's Claire Downs မှ)
ဤတွင်ငါတို့သည် သေးသည်အခြားဝါဒဖြန့်အပိုင်းအစ, ဒီကျယ်ပြန့် porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းပယ်ရန်ကြိုးစားနေ။ အဲဒါပြီးသွားပြီ The Daily Dot's အဘယ်သူ၏ကို Claire Down ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် "ချီကာဂိုအနာဂတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကတတိယမျိုးဆက်အလုပ်သမားသူမက cryptocurrencies နှင့် altcoins အတွက်အထူးပြုသည်။စိတ်ဝင်စားစရာကတော့ porn-induced ED ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မကြာသေးမီကလုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းအစတွေဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေမဟုတ်ဘဲပညာရှင်တွေ၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေပါ။
အခြားအထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများကိုကဲ့သို့ပင် Down လယ်ပြင်၌ရှိသောပင်ကိုယ်မူလနှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်လျစ်လျူရှုစဉ် (တကယ်တော့ကျသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြောဆိုသောအဘယ်အရာကိုမတှေ့ရသော) တူညီသောနှစ်ခုလေ့လာမှုများကိုးကား။
ငါ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍများဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ The Daily Dot ဤတွင် Claire Downs လျစ်လျူရှုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ အောက်ပါလေ့လာမှုအများစုကိုဤတွင်ကိုးကားထားသောကြောင့် (ငါရွေးချယ်သည်ဟုဆိုသည် စာပေဒ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာသူမယင်း၏ 8 စာရေးဆရာများများထဲမှကဲ့ရဲ့ရှုလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေးမှတ်သူမ၏အပိုင်းအစထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Down,):
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 40 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်လက်ရှိအမျိုးအစားများမှလေ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖို့ arousal လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
အချို့မှာ 3,000 ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံပြင်များ နာလန်ထူ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ထံမှအကောင့်ပြန်ဖွင့် 1, အကောင့်ပြန်ဖွင့် 2, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 3, က Short PIED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ).
မြောက်မြားစွာကျွမ်းကျင်သူများကို ကိုးကား. 140 ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကျော် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
ဒါ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာ: 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) သည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။ ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 25 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ် supporting ။
သူမ၏မိတ်ဆက်စာတွင် Downs က“ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီသုတေသနအကြောင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများအားမိန့်“ ဒါပေမယ့်ဆောင်းပါးမှာကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်ကိုသာကိုးကားထားတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများခံစားနေရသောအမျိုးသားများကိုမမြင်နိုင်သည့်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူလည်းမဟုတ်ပါ။
ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prauseကျယ်ပြန့်သည့်သမိုင်းကြောင်းရှိသူ၊ တက်တက်ကြွကြွမဲဆွယ်စည်းရုံးနေ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲဆန့်ကျင်ကောင်းစွာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နီကိုးလ် Prause PIED debunking နှင့်အတူအစွဲအလမ်းကြီးတစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ဘဲလျက် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြသောလူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နေစဉ်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15။ Prause လည်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်မှတဆင့်တိတ်ဆိတ်ဂယ်ရီ Wilson က.
ဒေါက်တာဟဲလ် Berg ကUSC တွင်ကျား၊ မရေးရာလေ့လာမှုဆိုင်ရာဆရာတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်သည်။ ” စာအုပ်? “porn သူ Work: ထုတ်လုပ်မှု၏ပွိုင့်မှာလူကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်, porn စွမ်းဆောင်ရည်, precarity နှင့်အလုပ်သမားစည်းရုံးရေးစုံစမ်းစစ်ဆေး"
ဤဆောင်းပါးသည်ညစ်ညမ်းသောဖော်ရွေသည့်ပါရဂူဘွဲ့ ၂ ခုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဆေးပညာရှင်တစ် ဦး မမြင်ရဘဲအမှန်တကယ်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်သည်။ Claire Downs သည်တလွဲသုံးသင့်သည် 140 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါဝင်တဲ့ဒီစာမျက်နှာ အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
ဒီတုန့်ပြန်၏ကျန် YBOP မှတ်ချက်များနောကျကို Claire Down ဆောင်းပါးကနေကောက်နှုတ်ချက်ထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။
urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta debunk ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုလုံးဝသီးခြားလေ့လာမှုများတက်ပေါင်းဘော်ရောနှော
Foresta ၏တွေ့ရှိချက်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုတွင် Downs သည် ၂၀၁၅ Foresta လေ့လာမှုကိုကိုးကားခဲ့သော်လည်းသူမ၏ကောက်နုတ်ချက်များသည် ၂၀၁၅ Foresta သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှ ၂၀၁၅ လေ့လာမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ကျား။
Claire Down: "PIED ၏" ကပ်ရောဂါ "၌ယုံကြည်သူများမကြာခဏကိုးကား 2015 လေ့လာချက် မှ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလိုတဲ့သဘောထားကိုအကြောင်းကို 28,000 အီတလီယောက်ျားစစ်တမ်းကောက်ယူ။ အဆိုပါလေ့လာမှုယောက်ျားလေးများ-ပထမဦးဆုံးလိင်စိတ်အတွက်ပျမ်းမျှအား-ကြုံတွေ့တစ်စက်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ IRL လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦးလျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားအပေါ်အသက်အရွယ် 14 န်းကျင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ဤတွင်သော်လည်း, ထိုဖမ်းင်: ဒါဟာမရကိုပြု၏။ ဒါကနိဂုံးချုပ်တူသောဘယ်လိုဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ပါသည် အဆိုပါဤကဲ့သို့ လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများ၏ libido အဆင့်ကိုဘယ်သောအခါမျှတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိပါ -“ လေ့လာမှု” သည်ထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းမျှသာဖြစ်သည်။
ဒေါင်းကပြောသည် "PIED ၏ "ကပ်ရောဂါ" ၌ယုံကြည်သူများမကြာခဏတဦးတည်းကိုးကား 2015 လေ့လာချက်"ဟုသူမကဒီလေ့လာမှုနှင့်ဆက်စပ်: မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015)။ ဤ Foresta လေ့လာမှုသည်အထက်တန်းကျောင်းသားများ (အသက် ၁၈ နှစ်) တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ စကားမစပ်ဒေါက်တာ Foresta သည်အီတလီမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာရောဂါဗေဒအသင်း၏ဥက္ကPresident္ဌ (သို့မဟုတ်ယခင်သမ္မတ) ဖြစ်သည်။ သူ့အဖွဲ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ကတော့ Non-စားသုံးသူအတွက် 16% နှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 0%, (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းလောင်သောသူတို့အဘို့နှင့် 6%) ။
သို့သော်ဒုတိယ link ကို (“ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကကြိုက်တယ် အဆိုပါဤကဲ့သို့ လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်”) နှင့်အားလုံးသူမ၏ကောက်နှုတ်ချက်တစ် 2011 စာနယ်ဇင်း Andrology ၏အီတလီလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ (Siam) ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ မြင် လွန်းကအင်တာနက် Porn သင်ျခြို urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta (2011) ဖြစ်ပေါ်စေ ကြောင်း Siam သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖုံးအုပ်ပိုပြီးအများအပြားဆောင်းပါးများသည်။
ဤ တစ်ဦး Foresta ဟောပြောပွဲ၏ 2014 PDF ဖိုင်ရယူရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုသတင်းပို့သောဆယ်ကျော်သက်ရာခိုင်နှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်ခြင်းအပါအဝင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်စာရင်းအင်းများပါ ၀ င်သည်။ Foresta သည်သူ၏လာမည့်လေ့လာမှုကိုလည်းဖော်ပြသည်။လိင်မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒနမူနာသစ်ပုံစံများ 125 ငယ်ရွယ်အထီး, 19-25 နှစ်ပေါင်း။ " အီတလီနာမSessualità mediatica အီး nuove Form di patologia sessuale Campione 125 giovani maschငါပဲ
သူမ၏အပျော်တမ်းအမှားကြောင့်“ ၂၀၁၅ လေ့လာမှု” နှင့်ပတ်သက်ပြီးဒေါင်းန်စ်ကမမှန်ကန်ပါ။ ၎င်းသည် Claire Downs ၏ထင်ရှားသောမတိကျမှုများနှင့်ပျက်ကွက်မှုများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
down န်ထမ်း ကြော်ငြာ hominem နှင့်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်တစ်ဦးကိုချွတ်မှုတ်ရန်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များပါဝင်သော peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ
မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များမှ၏နောက်အပိုဒ် Down အပန်းဖြေစခန်းနှင့် ကြော်ငြာ hominem:
က Claire ချ - "အခြား စက္ကူ"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေအငျတာနကျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Is?" ဤသည်၌ကိုးကားခဲ့သည် သံတော်ဆင့် ဆောင်းပါး porn အပေါ်ကြီးပြင်းသူတစ်ဦးမျိုးဆက်အကြောင်းကိုသတိပေး။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပျေါမှာ, ထိုစက္ကူ၏စာရေးဆရာများများထဲမှဂယ်ရီ Wilson က၏တည်ထောင်သူခဲ့သည် YourBrainOnPorn.com, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦး ဆောင်နေတယ်။
Down စာတမ်း၏အခွားစာရေးဆရာများခုနစျပါးကိုအမေရိကန်ရေတပ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြမေ့အချို့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ,2ဆီးရောဂါပါရဂူ,2စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းကနေမှ neuroscience အတွက်ပါရဂူဘွဲ့နဲ့ MD အပါအဝငျ။ သည်းခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအတွက်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုကိုဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။ အမျိုးသားသုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ တတိယလူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အဟောင်းကိုအလေးချိန် "အမြဲတမ်းကြိုးစားပါ ကြော်ငြာ hominem သငျသညျပစ္စည်းဥစ္စာဖြေရှင်းရန်နိုင်ဘူးအခါ။ " ဒါမှမဟုတ်ဒေါင်းစ်ကိစ္စမှာ၊ ဘာဖြစ်လို့တစ္ဆေရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုတကယ်စစ်ဆေးသင့်တာလဲ။ ငါကနိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဆန့်ကျင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏မိဘများကဲ့သို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ဤသည်ကျယ်ပြန့်လူသိများတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည် ယင်းအကြောင်း Us စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထား။ တစ်ဦးကအငယျဆုံးသောလူသိများတကယ်တော့ငါ့အကိုအလွန်လစ်ဘရယ်ဆီယက်တဲလ်-ထမြောက်တော်မူဖခင်လိင်ပညာရေးဆုံးမသွန်သင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါမျိုးစုံအင်တာဗျူး၌ငါ့သမိုင်းနှင့်မည်သို့ငါကိုတက်အဆုံးသတ်ကရှင်းပြသည်ပါပြီ www.yourbrainonporn 2011 ၌တည်၏။ (ပိုမိုဒီကိုတွေ့မြင်သည် ငါ့ကို 2016 အင်တာဗျူး နောဧသည်ခဘုရားကျောင်းအားဖြင့်။ ) ကျွန်မ porn မအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အမျိုးအစားထဲမှာ fluke မှတဆင့်, (မကြာမီ streaming များပြွန် porn ၏ထွန်းပြီးနောက်) 2007 ပတ်လည်ကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များအတွက် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်၏စောဒကယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးန်းကျင်ဆွေးနွေးမှုများဖန်တီးကြှနျုပျ၏မယားမဟုတ်ဘဲထင်ရှားတဲ့ဖိုရမ်ပေါ်မှာတင်စတင်ခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကြောင်းဖိုရမ်တစ်ခုမှာများစွာသောမဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျား porn တက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သညျထောကျအကူပွုသူတို့ရဲ့ရွယ်တူ '' အတွေ့အကြုံများကိုဖတ်ရှုခြင်းတွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ blogged ။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ဖိုရမ်သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့သက်ရောက်မှုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းငှါရှာကြံအတော်လေးလုလင်တို့နှင့်အတူလျှံခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖြစ်စဉ်သို့ကြည့်ဖို့ပညာသင်နှစ် sexologists ဟုမေးပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
2 တစ်ဒါဇင်ဆနျ့ကငျြလေ့လာမှုများလျစ်လျူရှုစဉ်ကို Claire Down နှစ်ခုအလွန်အမင်းဝေဖန်စာတမ်းများကိုးကား။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Down ကျော်ချန်လှပ် porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ ပို. အရေးကြီးသည်, Down7လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြချန်လှပ် ဖြစ်စေတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ထိုစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ) ။ အားလုံး6လေ့လာမှုများအတွက်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူငယ်ရွယ်လူနာ porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်နဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအနာကိုငြိမ်းစေ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားလေ့လာမှု ၁၉ ခုအားလျစ်လျူရှုသည့်စာတမ်း ၆ ခုကိုလျစ်လျူရှုကာကလဲဒေါင်းစ်ကစာရွက် ၂ စောင်ကို“ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်များ” ဟုကိုးကားခဲ့သည်။ ချီးမွမ်း & Pfaus, 2015 နှင့် Landripet & Stulhofer, 2015။ ပထမဦးစွာမစက္ကူတစ်ဦးအမှန်တကယ်လေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ချီးမွမ်း & Pfaus, 2015 အတူတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့အဟောင်းတွေစာတမ်းများကနေဒေတာတွေကို cobbled ။ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့,4အဟောင်းတွေစာတမ်းများကနေဒေတာတွေကိုအဘယ်သူအားမျှပေါင်းစပ်စက္ကူတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းဘာသာရပ်များသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများ၏နံပါတ်ကိုက်ညီဖို့နီးကပ်လာ၏။ Landripet & Stulhofer, 2015 ညီလာခံမှာအစီရင်ခံခဲ့အများအပြားသည်သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုချန်လှပ်ကြောင့်အကျဉ်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးစာတမ်းများကတော့သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက်ဝေဖန်နှင့်အခြားနေရာများတွင်ပါပြီ။ အဆိုပါ Down ဆောင်းပါးကနေသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်:
Claire Down: ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုထောက်ခံအားပေးသည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောရင်းမြစ်များကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီ 2015 လေ့လာချက်, အမှာသုတေသီများအားဖြင့်ကောက်ယူ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Psychophysiology နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း ပညာရေးနှင့်လူတို့၏ရှုမြင်လိင်ဇာတ်ကားအရေအတွက်ကများအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းအမှု၌, ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause အိမ်မှာပိုပြီးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့သူကိုအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုအားကောင်းလိင်စိတ်နိုးထတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် 2015 Cross-Section အွန်လိုင်းလေ့လာမှု အဆိုပါထုတ်ဝေနီးပါး 4,000 ဥရောပတို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, ED နှင့် porn နှင့်ပတ်သက်သောသိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်တစ်ချက်မတွေ့ရှိခဲ့နှင့် porn ကြည့်ရှုသူများအတွက် "သာ။ ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု" ကိုးကား။ "
စာတမ်းနှစ်ခုစလုံးကိုအမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပူးတွဲရေးသားခဲ့သောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါစာတမ်းနှစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောစရာများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားကဏ္createdများကိုငါဖန်တီးခဲ့သည်။ လမ်းတစ်ကြောင်းကိုရှာကြစို့။ Downs သည်သူမသတင်းရင်းမြစ်များပြောပြထားသည့်ကြားမှပင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းစက္ကူမှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောကြောင့်, ငါဒုတိယစက္ကူနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။
စက္ကူ 1: ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015 ။
ငါ Richard Isenberg မှတရားဝင်ဝေဖန်မှုနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်သော lay ဝေဖန်မှုကိုပေးသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များနှင့်အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပူးတွဲရေးသားသည့်စာတမ်းမှကောက်နုတ်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။
အဆိုပါပြောဆိုချက်ကို: Downs ၏ပြောဆိုချက်နှင့် (Prause & Pfaus ၏ပြောဆိုချက်နှင့်) ဆန့်ကျင်။ အပြာပိုကြည့်သည့်ယောက်ျားများသည်“ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပိုမိုပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုများ” မရှိခဲ့ပါ။ စက္ကူ၏ပြောဆိုချက်များအပေါ်အခြေခံသည့်လေ့လာမှု ၄ ခုမှတစ်ခုမျှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ အကဲဖြတ် ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလိင်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Prause & Pfaus ကသူတို့စက္ကူတွင်ပြောဆိုခဲ့သည့်အရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများကသူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုသတ်မှတ်သည် porn ကြည့်နေစဉ်။ သော့ချက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်နေစဉ်။ ” ဒါကဖြစ်ပါသည်, မဟုတ် တစ်ကယ့်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေစဉ်နှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်လူတစ် ဦး ၏နှိုးဆွမှုနှင့်စိုက်ထူမှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှမပြောပါ မဟုတ် (porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားတွေချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြသသည့်အခါတည်းဟူသော) porn ကြည့်ရှု။ ထိုသို့သော ratings လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလုံလုံလောက်လောက်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထားတဲ့ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED အကြောင်းဘာမျှမပြောပြ porn မသုံးဘဲ။ သို့သော် Prause & Pfaus မှ ၂၀၁၅ မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၎င်းတို့သည်ဘာသာရပ်များ၏နှိုးဆွမှုအဆင့်များကိုတိတိကျကျအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်
အငြင်းအခုံအတွက်၊ ပိုမိုကြည့်ရှုသောယောက်ျားများသည်အမျိုးသားများကသူတို့၏နိုးကြားမှုကိုနည်းနည်းကြည့်ရှုသူများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ဒီထက်ပိုပြီးတရား ၀ င်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ porn သုံးစွဲဖို့မတရားသော။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ာင်း, (porn) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါ (ဦးနှောက်) ကို Activation နှင့်တဏှာ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ဖြစ်၏။ အသိ (cue-reactivity ကိုနှင့်မတရားသော) တစ်ဦးချုပ်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ လေးလံသော porn အသုံးပြုသူပိုမိုမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal (မတရားသော) သတင်းပို့သေးလည်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူ arousal / စိုက်ထူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်သူသည် porn ကိုတုန့်ပြန်မှုသည်သူ၏“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု” သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုတို့၏သက်သေမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သော / စွဲလမ်းမှု၊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24.
Prause & Pfaus 2015 ရဲ့နောက်ကွယ်ကအဖြစ်မှန် - ဒီဟာက ED နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလေ့လာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာလုံးဝလေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ Prause သည်သူမ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုလေးခုမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်၊ Nicole Prause နှင့် Jim Pfaus တို့၏ဤစာတမ်းသည် peer-review လွန်သွားခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်မှာသူတို့၏စာတမ်းပါအချက်အလက်များသည်အခြေခံကျသောလေ့လာမှု ၄ ခုမှအချက်အလက်များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, plugged မရနိုငျသောအပေါက်တွင်း။ ထို့အပြင်စာရွက်တွင်မူရင်းအချက်အလက်မှားယွင်းနေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များမှအထောက်အပံ့မပေးသောပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မမှန်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူစတင် နီကိုးလ် Prause နှင့်ဂျင်မ် Pfaus ။ ဒီလေ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာနယ်လစ်အများအပြားရဲ့ဆောင်းပါးတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် ပိုကောင်း စိုက်ထူ, သေးသောစက္ကူကိုတွေ့သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်အင်တာဗျူးမှာတော့နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံးမဟုတ်မမှန်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိုက်ထူတိုင်းတာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့် porn ကိုသုံးသူယောက်ျားပိုကောင်းစိုက်ထူခဲ့။ ထဲမှာ ဂျင်မ် Pfaus တီဗီအင်တာဗျူး Pfaus ကဤသို့ဆို၏:
သို့သျောလညျးဤစာတမ်းတွင်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဘူး "စိုက်ထူ၏မြန်နှုန်း။ " သာအဆိုပါစက္ကူ ပြောဆိုထားသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုခေတ္တခဏကြည့်ပြီးနောက်ယောက်ျားများအားသူတို့၏“ နှိုးဆွမှု” ကိုသတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် (နောက်ခံစာတမ်းများမှပင်ဤရိုးရှင်းသောကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာအားဘာသာရပ်အားလုံး၏မေးမြန်းခြင်းကိုပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စာရွက်မှကောက်နုတ်ချက်သည် -
တနည်းအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ်စိုက်ထူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်ဒါမှမဟုတ် Lab ထဲမှာတိုင်းတာ!
ထောက်ခံမှုမရှိသောတတိယအချက် - Prause & Pfaus စက္ကူတွင်အားနည်းချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အဓိကစိုးရိမ်မှုများကိုပေါ်ပေါက်စေသည့်အယ်ဒီတာထံသို့ဒေါက်တာ Isenberg ၏ပေးစာ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' နှိုးဆွအဆင့်ဆင့်လာသောအခါသုံးနှိုင်းယှဉ်ကြပါပြီ 2015 ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်4အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမြဲမြံစွာတည်င့် ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာထို့ကြောင့်မည်သည့်တရားဝင်သုတေသနအဖွဲ့ကမျှထိုတုန့်ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤဘာသာရပ်များကိုအတူတကွစုစည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့စက္ကူ Prause & Pfaus မှာလေ့လာချက် ၄ ခုစလုံးကလိင်ရုပ်ရှင်တွေကိုသုံးခဲ့တယ်လို့မရေရာပါဘူး။
Prause ၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤဖော်ပြချက်သည်မှားသည်။ ဤသည် Prause & Pfaus ကသူတို့၏စာတမ်းသည်“ နှိုးဆွမှု” ဟုအကဲဖြတ်နိုင်သည်ဟုမပြောနိုင်သည့်ပထမအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်များအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သင်တစ် ဦး စီ၏တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုရမည်။
နောက်ခံစာတမ်းများအရဤဖော်ပြချက်သည်မှားသည်။ ဤသည် Prause & Pfaus သည်သူတို့၏စက္ကူကအမျိုးသားများအတွက်“ နှိုးဆွခြင်း” အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုမပြောနိုင်သည့်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်လေ့လာမှုတစ်ခုသည်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုရမည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုးဆွခြင်း၊ သို့မဟုတ်အခြားအရာများတိုးတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Prause-ထုတ်လုပ်သောခေါင်းစဉ်များအားလုံးသည်မလိုအပ်ဘဲဖြစ်သည်။
Dr. Isenberg ၏ဝေဖန်မှုကို Prause & Pfaus တုန့်ပြန်မှုတွင်စာရေးသူများသည်၎င်းတို့၏ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်ကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်မည်သည့်ဒေတာကိုမှမပေးခဲ့ပါ။ အဖြစ် ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာရွက်စာတမ်းများ, Prause & Pfaus တုန့်ပြန်ချက်သည်ဒေါက်တာ Isenberg ၏တရားဝင်စိုးရိမ်မှုများကိုရှောင်ရှားရုံမကများစွာပါ ၀ င်သည် အသစ် မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်အတော်ကြာလင်းမြင်သာမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အပေါ် commented ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015:
“ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာတမ်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသည်ဤစာတမ်းများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တရားဝင်တရားဝင်ဝေဖန်မှုများတွင်စောလွန်းနေပုံရသည်။ ပထမဆုံးစက္ကူသည်ငယ်ရွယ်သော ED တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စေသောဖြစ်နိုင်ခြေအခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံး ၀ င်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပါရှိသည်50] ။ သို့သော်ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ ချန်လှပ်မှုများနှင့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောစိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာရလဒ်ရလဒ်အတိုင်းအတာအတွက်စာရင်းအင်းရလဒ်များမရှိပါ။ ထို့အပြင်သုတေသနသမားတစ် ဦး ကဤစာတမ်း၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုတွင်ထောက်ပြသကဲ့သို့စာတမ်း၏ရေးသားသူများက“ စာဖတ်သူကိုလေ့လာခဲ့သောလူ ဦး ရေနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို၎င်းတို့၏နိဂုံးကိုခိုင်လုံစေရန်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမပေးခဲ့ပါ”51] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါသုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သောလကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာနာရီစုံစမ်းစစ်ဆေး။ သို့သျောလညျးတစျယောကျတညျးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီကြာ၏ variable ကို "နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပြဿနာများ", အ SAST-R ကို (စမ်းသပ်ပြလိင်စွဲလမ်း) တွင်ရမှတ်များ, နှင့် IATsex အပေါ်ရမှတ် (အနေနဲ့တူရိယာမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်လေ့လာမှုများတွေ့ပြီ ကြောင်း [) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှစွဲအကဲဖြတ်ထားပါသည်52, 53, 54, 55, 56] ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (cue reactivity ကို), အားလုံးစှဲအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုထူထောင် Correlate ကြည့်နေစဉ်တစ်ဦးကပိုကောင်းခန့်မှန်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings ဖြစ်ပါတယ် [52, 53, 54] ။ အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုစွဲလမ်းအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးကြောင်းတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ [ "ရှယျခကျြ, အကျိုးဆက်များနှင့်အပြုအမူ၏ Contextual ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းအကဲဖြတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင်စွဲလမ်းမှုသာစနစ်တကျအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်"57] ။ (အသုံးပြုမှုနာရီထက်အခြား) "hypersexuality" အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသုံးသုတေသနအဖွဲ့များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိသည်ဟု [15, 30, 31] ။ အတူတူယူကြ, ဒီသုတေသနအကြံပြုချက် "အသုံးပြုမှုနာရီ" ထက်, အမျိုးမျိုးသော variable တွေကိုညစ်ညမ်းစွဲ / hypersexuality ၏အကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာများနှင့်လည်းညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ယခုပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ညစ်ညမ်းစေသည့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” နှင့်သာဆက်စပ်မှုရှိခြင်းအားနည်းချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ လက်ရှိကြည့်ရှုနေသည့် porn ပမာဏသည် porn-induced ED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သော variable များစွာထဲကတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် -
အသက်အရွယ်ဆန္ဒအလျောက် porn ကို အသုံးပြု. စတင်
ဒီဖြစ်စဉ်သုတေသနပြုဖို့ပိုကောင်းလမ်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားယောက်ျားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အနာကိုငြိမ်းစေရသောအမှုလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ရလဒ်, စောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသုတေသနထုတ်ဖော်ပြသ causation အစားပဋိပက္ခဖြစ်အနက်ကိုဖွင့်လှစ် fuzzy ဆက်စပ်မှု၏။ အကြှနျုပျ၏ site ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူတထောင်အနည်းငယ်ယောက်ျား။
စက္ကူ 2: Landripet & Štulhofer, 2015 ။
Landripet & Štulhofer, ၂၀၁၅ ကို၎င်းကိုထုတ်ဝေသောဂျာနယ်မှ“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု” အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ စာရေးသူနှစ် ဦး သည်အခြားသက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ (နောက်ပိုင်းတွင်) ကိုချန်လှပ်စဉ်ဝေမျှရန်အချက်အလက်အချို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လိုပဲ ချီးကျူးခြင်း & Pfausအဆိုပါဂျာနယ်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးဝေဖန်မှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Landripet & Štulhofer: အပေါ်မှတ်ချက်: Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
သောအရေးဆိုမှုအဖြစ် Landripet & Štulhofer, 2015 porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားမျှဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ် ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များပါဝင်သောစာပေ၏သုံးသပ်ချက်ကို။ ထို့အပြင် Landripet & Štulhofer၏စက္ကူတွင်သူတို့တင်ပြသောထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (ပိုမိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) စာရွက်စာတမ်းမှစာပိုဒ်သုံးပိုဒ်၏ပထမနှင့်စတင်ကြပါစို့ Landripet & Štulhofer, 2015:
ကျွန်ုပ်နှင့်တွဲဖက်စာရေးသူများ၊ ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤစာတမ်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ပေါ်တူဂီအမျိုးသား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြပြီးနော်ဝေလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ပေါ်တူဂီအမျိုးသားများသည်နော်ဝေလူမျိုးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်စုံမှုနည်းပါးသည်။ Croat ဘာသာရပ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူ Landripet & Štulhofer, 2015 ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ဝန်ခံပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုလိမ္မာစာရငျးအငျးပညာသည်နှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးက MD အဆိုအရလှည့်စားစေခြင်းငှါ:
ဖြည့်စွက်ကာ, Landripet & Štulhofer 2015 စာရေးသူတစ်ဦးမှတင်ပြရာသုံးသိသိသာသာဆက်စပ်, ချန်လှပ် ဥရောပညီလာခံ။ သူက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
"တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုအစီရင်ခံ [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] သိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (သို့သော် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related မဟုတ်) အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ "
အဲဒါပြောနေတာပါ Landripet & Štulhofer သူတို့ရဲ့စက္ကူကနေညစ်ညမ်း၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဦးစားပေးအကြားကဒီသိသာဆက်စပ်မှုချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ porn အသုံးပြုသူများအအမျိုးအစားများ (သို့မဟုတ် fetishes) သို့မြင့်လာရန်အဘို့အအတော်လေးဘုံရဲ့၎င်းတို့၏မူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမကိုက်ညီပါဘူး, ဤအေးစက် porn ဦးစားပေးမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမကိုက်ညီပါဘူးတဲ့အခါမှာပညာရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းပြီးခဲ့သည့်လသို့မဟုတ်အကြိမ်ရေထဲမှာမယ့်နာရီ - ငါတို့သည်အထက်ထောက်ပြကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မျိုးစုံ variable တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အားဖြင့်ချန်လှပ်ဒုတိယအရေးပါသောတွေ့ရှိချက် Landripet & Štulhofer 2015 အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများပါဝင်ပတ်သက်:
လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်မကျင့် Landripet & Štulhofer ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာအရသူတို့သည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းနှင့်ယောက်ျားအနည်းငယ်အတွက်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သလား။ အဘယ်ကြောင့်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုŠtulhoferကိုမဆိုမဖော်ပြခဲ့ပါ များစွာသောလေ့လာမှုတွေ ဤအတူညီဒေတာအစုံမှပေါ်ပေါက်? မိမိအသင်းသူတို့ porn-သွေးဆောင် ED debunks ဖြစ်သော်လည်း, porn အသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖုံးကွယ်အကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကြားရန်အလွန်နှေးကွေးတောင်းဆိုဒေတာထုတ်ဝေရန်အလွန်လျင်မြန်ပုံရသည်။
အောက်ခြေလိုင်း: အားလုံးရှုပ်ထွေးပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများဝေးရောက်ရှိကွညောသင့်လျော်သောမီဆိတ်ကွယ်ရာ teased ရမည်ဖြစ်သည့်မျိုးစုံအချက်များ, ပါဝငျသညျ။ Landripet & Štulhofer ကြေငြာချက်“ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျစ်လျူရှုသောကြောင့်သုံးစွဲသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့သောအမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်လာခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွက်အပိုဒ်2&3Landripet & Štulhofer, 2015:
500 ပုံမှန်အတိုင်းအချက်များဖြင့်မျောသွားရှင်းပြလို့မရဘူးကတည်းကတစ်ဦးက 2010% သို့မဟုတ်ဒါနုပျို ED တိုးပွါး
(ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်) အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) ။
အခမဲ့ streaming porn (2006) ၏ထွန်းမတိုင်မီက Cross-Section လေ့လာမှုများနှင့် Meta-analysis သည်တသမတ်တည်း2အောက်မှာလူ 5-40% ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ % 10 မှ 2010% ကနေ 14 အကွာအဝေးကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 37 လေ့လာမှုများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% အထိစဉ်အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ (hypo-လိင်) အကွာအဝေး။ သည်အခြားလေ့လာမှုများယောက်ျား 25 ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်အောက်တွင်စဉ်တချို့ကလေ့လာမှုများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ယောက်ျား 40 နှင့်အောက်တွင်ပါဝငျသညျ။ အများဆုံးသိသိသာသာမကြာသေးခင်ကဥပမာ (2018) ၏တစ်ခုမှာပညာရေးအတွက်၏စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် porn သရုပ်ဆောင်များကို။ 30 အောက်မှာသူများသည် (အဘယ်သူ၏လိင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း highspeed အင်တာနက်က porn မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲတီထွင်) ကကျကွီးရှယျအိုမြားအဖြစ်နှစ်ကြိမ် ED နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ မြင် အမျိုးသားအရွယ်ရောက် Entertainment များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်: တစ်ဦးကစစ်တမ်း။
တိုတိုအတွက်နောက်ဆုံး 500 နှစ်များတွင်ငယ်ရွယ်နုပျို ED နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦး 1000% -10% တိုးရှိခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကို variable ကိုဒီနက္ခတ္တဗေဒမြင့်တက်မှုအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီလော Down နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောတူညီတဲ့အဟောင်း variable တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ဒီခုန်အဘို့အအပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်:
Claire Down: “ ED ကကံမကောင်းတာပါ၊ ဒါကအိုမင်းရင့်ရော်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်သည်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်းအသက် ၄၀ အောက်ရှိအမျိုးသားလေးယောက်တွင်တစ် ဦး သည်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည် ED များအတွက်ကုသမှုကိုရှာခြင်း။ နာတာရှည်ဖြစ်စေယာယီဖြစ်စေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးပြproblemsနာများ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အိပ်စက်ခြင်းရောဂါများနှင့်အာရုံကြောဒဏ်ရာများစသည့်များပြားလှသောအရာများကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ”
"အတှကျအဖြစ်ဆေးဝါးများ, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု" ဤအဆက်စပ်မှုအချက်များ၏နှုန်းထားများအဘယ်သူအားမျှ (ဆေးလိပ်သောက်အမှန်တကယ်ယုတ်လျော့ထားပါတယ်) ကိုပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်းတိုးလာကြပါပြီ။ အမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူမှ:
"အတှကျအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ: စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထိုအဘယ်သူအားမျှ အကွောငျး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, သူတို့ကရိုးရိုး ED ဖို့ကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့အချို့လေ့လာမှုများစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်လူနာရှိသည်သတင်းပို့ ပိုမိုမြင့်မား လိင်ဆန္ဒ အခြားလေ့လာမှုများကသိသာထင်ရှားသည်မှာစိတ်ကျရောဂါသည် ED ကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ED ရှိခြင်းသည်စိတ်ကျရောဂါစစ်ဆေးမှုကိုရမှတ်တိုးစေသည်။ ယူအက်စ်ရေတပ်စက္ကူမှ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသက် (၄၀) အရွယ်ရှိဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဤ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင် ED ပါသောလူနာများသည် ED မပါသောအမျိုးသားများနှင့်ကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Claire Downs ၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများကိုပြိုကွဲစေခဲ့သည် (တစ်ဦးရီးရဲလ်-ဘဝက Cross-Section လေ့လာမှုလူငယ်အမျိုးသားများအတွက်-တွေ့ရှိချက်များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်သည်အချက်များ):
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် ED နှင့်အတူလုလင်တို့သည်ပုံမှန် EF နဲ့နှိုင်းယှဉ်-အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုကနေအခြေခံလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြားမပြသဒါပေမယ့်ဆေးခန်း ED ၏တစ်ဦးထက်ပိုဖြစ်နိုင်ခြေ psychogenic အကြောင်းမရှိအကြံပြုခြင်း, နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရမှတ်ပုံဖော်။
အချို့သောအကြောင်းများကြောင့် ED ရှိသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးခြင်း (porn နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသင့်သည်။ ) ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန် Claire Downs သည်အခြား porn-induced ED deniers များကလူငယ်များ၏ ED သည်သက်ဆိုင်သောအလားတူစွန့်စားမှုအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ အမျိုးသားများသည်အသက် ၄၀ ကျော်များတွင် ED ဖြစ်သည်။ ဤပြောဆိုချက်များသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဒီနေ့ညစ်ညမ်းစားသုံးသူတွေဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပူစရာမလိုဘူးလို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာမကြေငြာခင်သုတေသီတွေကမကြာသေးခင်ကမှစာရင်းသွင်းဖို့လိုနေသေးတယ်။ နုပျို ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာ, အ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်အများအပြားလေ့လာမှုများ, ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ဆရာအစီရင်ခံစာများ porn: တစ်ခုတည်း variable ကိုဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်ပညာရေးငြိမ်းစေလျက်ယောက်ျား၏။
Down အတွက်သူမ၏ဆောင်းပါး update လုပ်ဖို့လိုပေမည် The Daily Dot အညီ။